Ukuhlobisa: Yiziphi izesekeli zezinwele okufanele uzithenge njengamanje? - Imfashini 2022
Ukuhlobisa: Yiziphi izesekeli zezinwele okufanele uzithenge njengamanje?
Imvelo kanye ne-minimalism
Ihlobo yisikhathi esifanele sokuzama izinwele zezinwele ezinhle ezintsha futhi uhlukanise isitayela sakho.
Ama-hoops, ama-hairpins namabhande okunwebeka - ukunaka kwale sizini ngemininingwane. U-stylist utshele ukuthi yiziphi izesekeli zezinwele ezisemfashini ngo-2020.
Akukho okunye okuwumkhuba oyinhloko wale sizini, kusho u-stylist u-Yulia Tsyganenko.
Ukukhuluma ngokuqondile mayelana nezitayela zomhlaba, lezi, okokuqala, imvelo kanye ne-minimalism. Njengoba i-hairstyle kufanele ibe yemvelo ngokwanele, kufanele kanjalo nezesekeli.
Into eyinhloko ukuthi akukho nomuzwa wokuthi unikeze izinwele zakho amahora ambalwa. Ukuze kungabonakali sengathi uzamile futhi weqisa.
Abaqambi bayaqhubeka nokugqugquzelwa izinkathi ezedlule. Isinyathelo esilandelayo ngama-90s. Izesekeli zezingane eziyintandokazi - iziqeshana zezinwele - zibuyile futhi. Izikhonkwane zezinwele zensimbi zinokubukeka kwangempela. Lolu khetho lulungele abathandi be-minimalism.
Futhi kulabo abafuna ukugcizelela ubufazi babo, izesekeli ezihlotshiswe ngezimbali zifanelekile.
I-hit engenakuphikiswa yesizini - iminsalo ezinweleni nayo izobukeka inhle. Isilikhi, i-velvet, i-chiffon, enkulu nezincane - lesi sesekeli sizobukeka ikakhulukazi njengabesifazane.
Futhi, imfashini yama-hoops. Badume kusukela ngonyaka odlule. Amabhande ekhanda abanzi ayenziwe nge-velvet ne-satin, abaklami baphinde banikeze amabhande amancane amakhanda enziwe ngamaparele angaphenduliwe, amakristalu namatshe anemibala eminingi.
Ukusondelana ebuhlotsheni besikhathi eside: yini okufanele uyenze ukuze "inhlansi ingaphumi"